Xadgudubyadii Hab-maamuus Shirkii IGAD ee Muqdisho | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Xadgudubyadii Hab-maamuus Shirkii IGAD ee Muqdisho
Xadgudubyadii Hab-maamuus Shirkii IGAD ee Muqdisho
Waxaa wax laga xumaado ah war saxaafadeedka ka soo baxay shirkii IGAD ee Muqdisho lagu qabtay 13-kii September 2016-ka, kaas oo lagu sheegay in uu ahaa shirkii 28-aad ee aan caadiga ahayn, runtuna waxa ay ahayd in uu ahaa shir caadi ah. Sababta sidaa loo yeelay ayaa dadka taxliiliya siyaasadda ku sheegeen in ay ahayd in Madaxweynaha Soomaaliya ee martida loo ahaa Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uusan guddoomin shirka, guddoonka IGAD-na uusan la wareegin dhammaadka shirka sida xeerka IGAD uu dhigayo.
Taniyo 2008-dii waxaa hoggaanka IGAD qaab aan sharci ahayn ku hayay Itoobiya. Sidoo kale loogama hadlin sidii shirarka IGAD looga bartay ammuuraha khuseeya dalalka ku mideysan ururkan sida xasaradaha ka taagan Koonfurta Suudaan oo meel xun maraya.
Tankale, qodobka 12-aad ee war saxaafadeedka IGAD ayaa loogu baaqay beesha caalamku in wixii kaalmo dhaqaale ah ee Soomaaliya loogu talo-galay in loo soo mariyo Urur Goboleedka IGAD. Taas oo micnaheedu yahay in dowladda Soomaaliya aan lagu aamini karin deeqaha beesha caalamku ugu talogashay, waxaa kale oo qodobkaani ku xadgudbayaa madax bannaanida Soomaaliya oo in la dhowro baaqa lagu sheegay. Waa arrimo isburinaya oo u baahan in dowladda Soomaaliya ka daba tagto.
Shirka waxaa guddoomiyey, haddana weli guddoominaya Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya, sababtuna sida ilo xog ogaal ahi u sheegeen Xaqiiqa Times Itoobiya ayaa dooneysa in guddoonka IGAD ay si sharci darro ah kusii haysato ilaa inta ay xubin ka noqoneyso golaha ammaanka oo ay haatan qalqaalo siyaasadeed ugu jirto.
Waxaa kale oo xusid mudan in xaafiiska IGAD ee Soomaaliya ee Addis Ababa ku yaala in uu qabto shaqadii dowladda Soomaaliya laga rabey in ay qabsato. Laakiin nasiib darro ay Itoobiya ku shaqeysato, welina aysan jirin dowlad Soomaaliyeed oo garata in ay hawshaasi iyada xaq uleedahay.
Ra’iisul Wasaarihii geeriyooday ee Itoobiya Meles Zenawi oo doonayey in uu isbaaro u dhigto siyaasadda iyo deeqaha Soomaaliya loogu talo galay ayaa furtay xaafiiskaas.
Waxaase isweydiin leh Soomaaliya awooddi waysey in ay garowsato shaqooyinka Xaafiiska IGAD uu hayo oo xadgudub ku ah madax bannaanida iyo sharafta Soomaaliya?.
Previous articleFalanqeynta Shirkii IGAD ee Muqdisho
Next articleCabashooyin Ka Jira Xulista Ergada Dooraneysa Xubnaha Barlamaanka